Zvinyorwa zvaJayson DeMers pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Jayson DeMers
Jayson DeMers ndiye muvambi & CEO we EmailAnalytics, chishandiso chishandiso chishandiso chinobatanidza kune yako Gmail kana G Suite account uye unoona yako email chiitiko - kana icho chevashandi vako. Mutevere iye mberi Twitter or LinkedIn.
5 Yakakura SEO Maitiro Anotambudza Vaimbi Vanogona Kushandisa
China, July 18, 2013 Jayson DeMers
Saka iwe uri muimbi arikutsvaga kuti ataure online uye iwe uri kufunga nezvekuita yekutsvaga injini optimization (SEO) matekiniki akushandire iwe? Kana zvirizvo, saka rairwa kuti, nepo pasina mashiripiti bara pakutsvaga injini yekugadzirisa, zvakare hazvisi zvakaoma kuvandudza yako yekutsvaga kuoneka mukati meGoogle neBing. Heano mashanu anoshanda SEO matekiniki evaimbi ekuvandudza yekutsvaga injini kuoneka. 1. Blogging Blogging inzira huru
6 Zviratidzo Inguva Yekuchera Yako Analytics Software
Chipiri, July 9, 2013 Jayson DeMers
Yakanyatsogadzirwa bhizinesi njere (BI) software mhinduro yakakosha kune chero sangano rinoda kuona iyo ROI yezvavanoita online. Kunyangwe iri yekutevera chirongwa, email kushambadzira mushandirapamwe, kana kufungidzira, kambani haigone kubudirira pasina kuteedzera nzvimbo dzekukura nemukana kuburikidza nekuzivisa. Analytics software inongodya nguva nemari kana ikasatora mhedziso yakajeka yekuti bhizinesi riri kuita sei. Tarisa uone izvi zvitanhatu zvikonzero zvekudonhedza imwe
Maitiro ekuita Inobudirira Yemunharaunda SEO paBhajeti
Svondo, June 23, 2013 Svondo, June 23, 2013 Jayson DeMers
Nekufamba kwenguva, SEO yave kuomarara uye kuomarara, asi izvo zvinofanirwa kureva kuti zvinodhura here? Haasi ese makambani anoda SEO masevhisi ari Internet-based kana IT-zvine hukama. Muchokwadi, ruzhinji idiki, emabhizinesi emuno anoshandira yakatarwa nzvimbo. Ava vanhu vanoda SEO yemuno kwete yechinyakare, yenyika SEO. Mabhizimusi emuno nevanhu vamwe nevamwe - vanachiremba vemazino, varongi vemapombi, zvitoro zvembatya, zvitoro zvemagetsi — hazvidi kuti vanyanye kutsvagwa pasirese
5 Nzira dzeKuita Kuti Vatengi Vako Vanzwe Vanodiwa
Chipiri, June 11, 2013 Jayson DeMers
Vatengi sevhisi miitiro yakanaka inoda yakawanda kupfuura kunyemwerera, kunyangwe icho chiri chokwadi kutanga kwakanaka. Vanofara vatengi vanotungamira kudzokorora bhizinesi, yakawedzera yakanaka ongororo (iyo inosimudzira yemuno SEO), uye yakawedzera masocial masaini nemaonero akanaka (ayo mabhutsu akazara ekutsvaga kwekutsvaga kuoneka), uye hapana kambani inogona kuvapo isina vatengi vavo. Hedzino shanu nzira dziri nyore dzekuti vatengi vako vanzwe kudiwa. 1. Bvunza iyo Yakakodzera Mibvunzo Kambani imwe neimwe inofanira kubvunza uyu mubvunzo zuva nezuva: Chii
Maitiro Ekuwedzera Ekuteerera Kwevateereri uye Tora Mhinduro
Chitatu, June 5, 2013 Jayson DeMers
Kugadzira buzz yakakomberedza bhizinesi uye kuita kuti yako tarisiro vateereri vafarire zvigadzirwa zvako kana masevhisi ndiyo yekutanga nhanho yekuvaka nharaunda yakatendeka. Munguva pfupi, izvi zvinogona kutungamira kukuwedzera traffic uye kutengesa. Mukufamba kwenguva, izvi zvinogona kumisikidza legion yemamishinari echiratidzo anoshanda zvakanyanya sechikwata chevatengesi veguerilla. Sezvo kuhwina pamusoro pemwoyo yehuwandu hwevanhu kunonyanya kutsamira pakuita kwevateereri, zvakakosha kushandisa
Penguin 2.0: Zvinhu zvina zvaunofanira Kuziva
Chishanu, May 24, 2013 Chishanu, May 24, 2013 Jayson DeMers
Zvakaitika. Neimwe blog post, kuburitswa kwealgorithm, uye maawa mashoma ekugadzirisa, Penguin 2.0 yakaburitswa. Iyo Internet haizove yakafanana. Matt Cutts akaburitsa kapfupi chinyorwa pamusoro wenyaya muna Chivabvu 22, 2013. Heano mana akakosha mapoinzi aunofanirwa kuziva nezve Penguin 2.0 1. Penguin 2.0 yakabata 2.3% yemibvunzo yese yeChirungu -US. Kunze kwekuti 2.3% kurira kwauri seyakawandisa nhamba, chengeta mupfungwa kuti
5 Makomborero ekuwedzera iyo infographic kune yako saiti
Chipiri, May 14, 2013 China, April 27, 2017 Jayson DeMers
Vanhu vanotyairwa nemifananidzo nemavhidhiyo, uye inguva yenguva infographics vakawana rukudzo rwavaifanirwa. Ivo vanopfuura zvinopfuura mufananidzo wakanaka; vane izvo zvinotora kuenda kuhutachiona pamwe nekuvandudza chiziviso cheruzivo, zvemagariro zviratidzo, uye midhiya buzz. Infographics inorongedza yakawanda punchi mumufananidzo uye inogona kushandiswa kuenzanisira poindi uye nekuchenesa kusunga chokwadi pamwe chete. Izvo zvinonyanya kukurudzira kukosha kwavo inyaya yekuti ivo
5 Nzwisiso Yemagariro Dhata Inogona Kuzivisa Yewe Bhizinesi
Muvhuro, April 22, 2013 Svondo, October 4, 2015 Jayson DeMers
Nemawebhusaiti enhau akadai seTwitter neFacebook pane meteoric simuka, makambani ari kutanga kuisa data rakaunganidzwa kubva kumasocial sites nevashandisi vawo muzvinhu zvakawanda zvebhizimusi ravo kubva kushambadziro kusvika mukati meHuman Resources nyaya - uye nechikonzero chakanaka. Iko kuwanda kwehuwandu hwemagariro enhau data kunoita kuti zvive zvakaoma kunetseka kuongorora. Nekudaro, akasiyana masevhisi e data ari kubuda kuti apindure dambudziko rekuita pfungwa yezvose izvi